समाचार - २०२१ का लागि फेसन र कपडा उद्योगका शीर्ष ९ प्रवृत्तिहरू
फेसन र कपडा उद्योगले गत वर्षमा केही रोचक दिशाहरू लिएको छ। यी मध्ये केही प्रवृतिहरू महामारी र सांस्कृतिक परिवर्तनहरूद्वारा ट्रिगर भएका थिए जसले आउने वर्षहरूमा दिगो प्रभाव पार्न सक्छ।
उद्योगमा बिक्रेताको रूपमा, यी प्रवृतिहरू बारे सचेत रहनु एक निरपेक्ष आवश्यक छ। यस पोष्टमा, हामी उद्योगका लागि २०२१ को भविष्यवाणीहरूमा डुब्न अघि फेसन र कपडाका शीर्ष प्रचलनहरू मध्ये9लाई तोड्न जाँदैछौं। Alibaba.com मा कपडा बेच्नका लागि केही उत्तम सुझावहरू छलफल गरेर हामी चीजहरू समेट्नेछौं।
सुरु गर्नका लागि केही द्रुत उद्योग तथ्याङ्कहरू हेरौं।
फेसन उद्योग एक नजर मा
फेसन र परिधान उद्योग मा शीर्ष9प्रवृत्ति
2021 फेसन र परिधान उद्योग पूर्वानुमान
alibaba.com मा कपडा बेच्नका लागि सुझावहरू
एक नजर मा फेसन उद्योग
हामीले फेसन र कपडा उद्योगमा शीर्ष प्रचलनहरूमा डुब्नु अघि, विश्वव्यापी स्तरमा उद्योगको स्न्यापसटमा द्रुत रूपमा हेरौं।
विश्वव्यापी फास्ट फेसन उद्योग सन् २०२८ सम्ममा ४४ बिलियन अमेरिकी डलर हुने गतिमा छ।
फेशन उद्योगमा अनलाइन किनमेल वर्ष 2023 सम्ममा 27% पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ किनभने धेरै खरीददारहरूले अनलाइन कपडा किन्छन्।
संयुक्त राज्य अमेरिका 349,555 मिलियन अमेरिकी डलरको बजार मूल्यको साथ, विश्वव्यापी बजार सेयरहरूमा एक नेता हो। चीन ३२६,७३६ मिलियन अमेरिकी डलरमा दोस्रो स्थानमा छ।
B2B खरीददारहरूको 50% फेसन र कपडा उत्पादनहरू खोज्दा इन्टरनेटमा फर्कन्छ।
उद्योग प्रतिवेदन २०२१
फेसन र परिधान उद्योग
हाम्रो नवीनतम फेसन उद्योग रिपोर्ट हेर्नुहोस् जसले तपाईंलाई नवीनतम उद्योग डेटा, प्रचलन उत्पादनहरू, र Alibaba.com मा बिक्रीको लागि सुझावहरू परिचय गराउँछ।
हामीले उल्लेख गरेझैं, विश्वव्यापी फेसन र कपडा उद्योगले गत वर्षमा केही प्रमुख परिवर्तनहरू देखेको छ। यस उद्योगमा शीर्ष9प्रवृतिहरूमा एक नजर राखौं।
1. eCommerce बढ्न जारी छ
अनलाइन किनमेल केही वर्षदेखि उपभोक्ताहरूमाझ लोकप्रिय भएको छ, तर कोभिड-सम्बन्धित तालाबन्दीका कारण पसलहरू धेरै महिनासम्म बन्द गर्न बाध्य भएका थिए। दुर्भाग्यवश, धेरै अस्थायी बन्दहरू स्थायी भए किनभने यी स्टोरहरूले घाटाहरू अवशोषित गर्न र फिर्ता बाउन्स गर्न असमर्थ थिए।
सौभाग्य देखि, eCommerce पहिले नै महामारी भन्दा पहिले नै सामान्य बनिरहेको थियो, त्यसैले केहि व्यवसायहरू लगभग विशेष रूपमा eCommerce तिर सरेर बाँच्न सक्षम थिए। हाल, ईटा र मोर्टार स्टोरफ्रन्टहरूमा बिक्रीमा फर्कन व्यवसायहरूका लागि धेरै फाइदाहरू छैनन्, त्यसैले यो सम्भव छ कि ईकमर्स बढ्दै जानेछ।
2. लुगाहरू लिंगविहीन हुन्छन्
लिङ्गको विचार र यी निर्माणहरू वरपरका "मानदण्डहरू" विकसित हुँदैछन्। शताब्दीयौंदेखि, समाजले पुरुष र महिलालाई दुई फरक बाकसमा राखेको छ। यद्यपि, धेरै संस्कृतिहरूले रेखाहरूलाई धमिलो पारिरहेका छन् र मानिसहरूले तिनीहरूको लिंगको आधारमा उनीहरूलाई तोकिएको कुराको सट्टा आफूलाई सहज महसुस गर्ने लुगा लगाउन थालेका छन्।
यसले थप लिङ्गविहीन कपडाहरू सिर्जना गर्न उत्प्रेरित गरेको छ। यस बिन्दुमा, त्यहाँ केवल केहि पूर्ण लिंगरहित ब्रान्डहरू छन्, तर धेरै ब्रान्डहरूले युनिसेक्स "आधारभूत" रेखाहरू समावेश गर्दैछन्। केहि सबैभन्दा लोकप्रिय लिंगरहित ब्रान्डहरूमा अन्धोपन, एक डीएनए, र मटनहेड समावेश छन्।
निस्सन्देह, धेरैजसो फेसन उद्योगलाई "पुरुष," "महिला," "केटाको" र "केटीहरू" मा विभाजित गरिएको छ, तर युनिसेक्स विकल्पहरूले मानिसहरूलाई ती लेबलहरूबाट टाढा रहन मन पराउँछन् भने।
3. आरामदायक कपडाको बिक्रीमा वृद्धि
COVID-19 ले धेरै मानिसहरूको जीवन शैली परिवर्तन गरेको छ। धेरै वयस्कहरू टाढाको काममा सरेका छन्, बच्चाहरू टाढाको शिक्षामा सरेका छन्, र धेरै सार्वजनिक स्थानहरू बन्द भएका छन्, मानिसहरूले घरमा बढी समय बिताइरहेका छन्। मानिसहरू घरमै थुनिएकाले खेलकुदको बिक्रीमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ1 र लाउन्जवेयर।
2020 को मार्च मा, त्यहाँ 143% वृद्धि थियो2 पायजामाको बिक्रीमा ब्राको बिक्रीमा १३% कमी आएको छ। मानिसहरूले ब्याटबाट आरामलाई प्राथमिकता दिन थाले।
2020 को अन्तिम क्वार्टरमा, धेरै फेसन रिटेलरहरूले आराम कुञ्जी भएको कुरा बुझ्न थाले। तिनीहरूले उपलब्ध सबैभन्दा सहज वस्तुहरूलाई जोड दिन आफ्नो अभियानहरू व्यवस्थित गरे।
धेरै व्यवसायहरूले मानिसहरूलाई घरबाट काम गर्न अनुमति दिन जारी राखेकाले, यो प्रवृति केही समयसम्म रहन सक्ने सम्भावना छ।
4. नैतिक र दिगो खरिद व्यवहार
हालका वर्षहरूमा, धेरै सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूले फेसन उद्योगसँग सम्बन्धित सामाजिक मुद्दाहरूमा ध्यान ल्याएका छन्, विशेष गरी जब यो छिटो फेसनको कुरा आउँछ।
शुरुवातका लागि, कपडाको फोहोर3 उपभोक्ताहरूको खर्च गर्ने बानीको कारणले सबै समय उच्च छ। मानिसहरूले आफूलाई चाहिनेभन्दा बढी लुगाहरू किन्छन् र हरेक वर्ष अरबौं टन फोहोरमै पुग्छन्। यस फोहोरसँग लड्न, केही व्यक्तिहरू ब्रान्डहरू तर्फ झुकाइरहेका छन् जसले या त उच्च गुणस्तरका उत्पादनहरू बनाउँछन् जुन लामो समयसम्म टिक्नको लागि हो वा तिनीहरूका कपडाहरू बनाउन पुन: प्रयोग गरिएका सामग्रीहरू प्रयोग गर्छन्।
अर्को नैतिक मुद्दा जुन प्रायः उठ्छ पसीने पसलहरूको प्रयोग हो। धेरै गरीब अवस्थामा काम गर्नका लागि कारखानाका कामदारहरूलाई पैसा तिर्ने विचार धेरैलाई राम्रोसँग बस्दैन। यी मुद्दाहरूमा थप सचेतना ल्याइएको हुनाले, अधिक उपभोक्ताहरूले निष्पक्ष व्यापार अभ्यासहरू प्रयोग गर्ने ब्रान्डहरूलाई समर्थन गरिरहेका छन्4.
मानिसहरूले जीवन शैलीलाई स्थायित्वतर्फ परिवर्तन गर्न जारी राख्दा, यी प्रवृतिहरू आउने वर्षहरूसम्म जारी रहन सक्छन्।
5. "पुन: व्यापार" को वृद्धि
पछिल्लो एक वर्षमा, "ReCommerce" धेरै लोकप्रिय भएको छ। यसले प्रयोग गरिएका कपडाहरू किन्नको लागि किन्ने पसल, कन्साइनमेन्ट पसल वा इन्टरनेटमा बिक्रेताबाट सिधै किन्नलाई जनाउँछ। LetGo, DePop, OfferUp, र Facebook मार्केटप्लेसहरू जस्तै उपभोक्तादेखि उपभोक्ता बजारहरूले निश्चित रूपमा "पुन: कमर्स" प्रवृत्तिलाई सहज बनाएका छन्।
यस प्रवृतिको अंश पर्यावरणमैत्री खरिद र फोहोर घटाउनेतर्फ सर्नु हो, तर "अपसाइकलिङ" र भिन्टेज टुक्राहरू पुन: निर्माण गर्ने काम पनि बढ्दै गएको छ। अपसाइक्लिङ भनेको मूलतया जब कसैले कपडाको एक लेख लिन्छ र आफ्नो शैलीसँग मेल खाने गरी यसलाई सुधार गर्दछ। कहिलेकाहीँ, यसमा मर्ने, काट्ने र कपडा सिलाई केही नयाँ बनाउन समावेश छ।
उपभोक्ताहरूका लागि ReCommerce को अर्को ठूलो अपील भनेको उनीहरूले खुद्रा मूल्यको एक अंशमा हल्का रूपमा प्रयोग गरिएका कपडाहरू प्राप्त गर्न सक्छन्।
6. ढिलो फेसनले लिन्छ
स्थिरता र मानव अधिकारको सन्दर्भमा यसको नैतिक प्रभावहरूको कारण मानिसहरूले द्रुत फेसनलाई तुच्छ हेर्न थालेका छन्। स्वाभाविक रूपमा, ढिलो फेसन एक लोकप्रिय विकल्प बनिरहेको छ, र फेसन उद्योगमा अख्तियार भएका ब्रान्डहरू परिवर्तनको लागि अगाडि बढिरहेका छन्।
यसको अंशमा "मौसमविहीन" फेसन समावेश छ। फेसन स्पेसका प्रमुख खेलाडीहरूले नयाँ शैलीहरूको नियमित मौसमी रिलिजहरूबाट अलग हुनको लागि एउटा बिन्दु बनाएका छन् किनभने त्यो दृष्टिकोणले स्वाभाविक रूपमा छिटो फेसनको नेतृत्व गर्यो।
त्यहाँ शैलीहरूको जानाजानी रिलीजहरू छन् जुन परम्परागत रूपमा अन्य मौसमहरूमा प्रयोग गरिन्थ्यो। उदाहरणका लागि, फ्लोरल प्रिन्टहरू र पेस्टलहरू सामान्यतया वसन्त फेसन लाइनहरूसँग सम्बन्धित छन्, तर केही ब्रान्डहरूले यी प्रिन्टहरू तिनीहरूको पतन रिलीजहरूमा समावेश गरेका छन्।
मौसमविहीन फेसनहरू सिर्जना गर्ने र मौसमी प्रचलनहरू विरुद्ध जाने लक्ष्य भनेको उपभोक्ताहरू र अन्य डिजाइनरहरूलाई टुक्राहरूलाई दुई महिना भन्दा बढीको लागि शैलीमा रहन अनुमति दिन आग्रह गर्नु हो। यसले ब्रान्डहरूलाई उच्च मूल्य ट्यागहरूका साथ उच्च गुणस्तरका टुक्राहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ जुन धेरै सिजनहरू रहनका लागि हो।
यो प्रवृत्ति कसरी अगाडि बढ्छ भनेर हेर्नको लागि रोचक हुनेछ किनभने धेरै फेसन ब्रान्डहरूले अझै यी अभ्यासहरू अपनाएका छैनन्। यद्यपि, उद्योगका नेताहरूले पहल गरेको हुनाले, धेरै व्यवसायहरूले नेतृत्व पछ्याउन सक्छन्।
7. अनलाइन किनमेल विकसित
हालैका वर्षहरूमा अनलाइन किनमेल अधिक र अधिक लोकप्रिय भएको छ, तथापि, धेरै उपभोक्ताहरू अनलाइन कपडा किन्न हिचकिचाउँछन् किनभने तिनीहरू वस्तु कसरी फिट हुन्छ भनेर हेर्न सक्षम हुन चाहन्छन्। गत वर्षमा, हामीले यो समस्या समाधान गर्ने प्रविधिको उदय देखेका छौं।
eCommerce रिटेलरहरूले भर्चुअल वास्तविकता र संवर्धित वास्तविकता टेक्नोलोजीको मद्दतले अनलाइन किनमेल अनुभव सुधार गर्दै छन्। यी दुवै प्रविधिहरूले खरिदकर्ताहरूलाई वस्तु वास्तविक जीवनमा कस्तो देखिन्छ भनेर हेर्न भर्चुअल फिटिङ कोठा प्रयोग गर्ने क्षमता दिन्छ।
यस प्रकारको प्रदर्शनलाई समर्थन गर्ने केही एपहरू छन्। यो प्रविधि अझै पनि सिद्ध भइरहेको छ, त्यसैले यो सम्भव छ कि अधिक र अधिक खुद्रा विक्रेताहरूले आगामी वर्षहरूमा तिनीहरूलाई आफ्नो अनलाइन स्टोरहरूमा लागू गर्नेछन्।
8. समावेशीता प्रबल हुन्छ
धेरै वर्षदेखि, प्लस साइजका महिलाहरूलाई उनीहरूको शरीरको प्रकार अनुरूप कपडाहरूमा धेरै विविधताहरू फेला पार्न गाह्रो भएको छ। धेरै ब्रान्डहरूले यी महिलाहरूलाई बेवास्ता गरे र मानक सानो, मध्यम, ठूलो वा अतिरिक्त-ठूलो पहिरन नगर्ने मानिसहरूलाई मिल्ने शैलीहरू सिर्जना गर्न असफल भए।
शारीरिक सकारात्मकता एक बढ्दो प्रवृत्ति हो जसले सबै आकार र आकारहरूको शरीरको प्रशंसा गर्दछ। यसले उपलब्ध आकार र शैलीहरूको सन्दर्भमा फेसनमा थप समावेशीताको नेतृत्व गरेको छ।
द्वारा संचालित अध्ययन अनुसार Alibaba.com, प्लस-साइज-महिला-कपडाको बजार यस वर्षको अन्त्यसम्ममा 46.6 बिलियन अमेरिकी डलर हुने अपेक्षा गरिएको छ जुन तीन वर्ष अघिको मूल्यको भन्दा दोब्बर हो। यसको मतलब यो हो कि प्लस-साइज महिलाहरूसँग पहिले भन्दा धेरै कपडा विकल्पहरू छन्।
समावेशीता यहाँ समाप्त हुँदैन। SKIMS जस्ता ब्रान्डहरूले "नग्न" र "तटस्थ" टुक्राहरू सिर्जना गर्दैछन् जुन गोरो छालाको टोन भएका मानिसहरूका लागि मात्र काम गर्दछ।
अन्य ब्रान्डहरूले क्याथेटरहरू र इन्सुलिन पम्पहरू जस्ता स्थायी हार्डवेयर चाहिने विभिन्न चिकित्सा अवस्थाहरू समायोजन गर्ने समावेशी कपडा लाइनहरू सिर्जना गर्दैछन्।
धेरै प्रकारका मानिसहरूका लागि काम गर्ने शैलीहरू सिर्जना गर्नुको अतिरिक्त, फेसन उद्योगले उनीहरूको अभियानहरूमा थप प्रतिनिधित्व थप्छ। धेरै प्रगतिशील ब्रान्डहरूले विभिन्न प्रकारका शरीरका विभिन्न जातका मोडेलहरू भर्ती गरिरहेका छन् ताकि धेरै उपभोक्ताहरूले पत्रिकाहरूमा, बिलबोर्डहरूमा र अन्य विज्ञापनहरूमा उनीहरू जस्तै देखिने मानिसहरूलाई देख्न सकून्।
9. भुक्तानी योजनाहरू उपलब्ध हुन्छन्
धेरै खुद्रा विक्रेताहरूले उपभोक्ताहरूलाई खरिद पछि भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता दिइरहेका छन्। उदाहरणका लागि, एक खरिदकर्ताले $400 अर्डर गर्न सक्छ र खरिदको समयमा $100 मात्र तिर्छ त्यसपछि अर्को तीन महिनामा बराबर भुक्तानीहरूमा बाँकी शेष रकम तिर्नुहोस्।
यो "अहिले किन्नुहोस्, पछि तिर्नुहोस्" (BNPL) दृष्टिकोणले उपभोक्ताहरूलाई पैसा खर्च गर्न अनुमति दिन्छ जुन उनीहरूसँग आवश्यक छैन। यो तल्लो-अन्त फेसन ब्रान्डहरू बीच सुरु भयो, र यो डिजाइनर र लक्जरी ठाउँमा घुम्दै छ।
यो अझै पनि नयाँ कुरा हो कि यसले दीर्घकालीन रूपमा उद्योगलाई कसरी असर गर्छ भन्ने बारे थोरै जानकारी छ।
२०२१ मा फेसन र कपडा उद्योग कस्तो देखिन्छ भनेर भविष्यवाणी गर्न धेरै गाह्रो छ किनकि हामी अझै महामारीको बीचमा छौं। त्यहाँ अझै धेरै अनिश्चितताहरू छन् र धेरै मानिसहरू अझै पनि तिनीहरू सामान्य रूपमा बाँचिरहेका छैनन्, त्यसैले यो भन्न गाह्रो छ कि उपभोक्ता व्यवहार पहिलेको रूपमा फर्किनेछ कि वा कहिले5.
तर, नयाँ र सुधारिएको प्रविधि र सामाजिक चेतनासँग सम्बन्धित प्रवृत्ति केही समयका लागि जारी रहने राम्रो सम्भावना छ । टेक्नोलोजी सम्भवतः सुधार गर्न जारी रहनेछ, र मानिसहरूले सामाजिक चेतनालाई अझ बढी कदर गर्नेछन् किनभने तिनीहरू जटिल विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा बढी सचेत र शिक्षित हुन्छन्।
Alibaba.com ले फेसन उद्योगमा धेरै क्रेता र बिक्रेताहरू बीचको लेनदेनको सुविधा दिन्छ। यदि तपाइँ Alibaba.com मा कपडा बेच्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ तपाइँको उत्पादनहरु को लागी एक्सपोजर बढाउन र अधिक बिक्री गर्न को लागी केहि चीजहरु छन्।
हाम्रो प्लेटफर्ममा बिक्रीको लागि शीर्ष सुझावहरू मध्ये केहीलाई हेरौं।
1. प्रवृत्तिहरूमा ध्यान दिनुहोस्
फेसन उद्योग सधैं परिवर्तन र विकसित हुँदैछ, तर हामीले गत वर्ष देखेका केही प्रवृतिहरूले आउने वर्षहरूको लागि टोन सेट गर्न सक्छ।
समावेशीता र दिगो फेसनप्रति प्राथमिकता, उदाहरणका लागि, दुई प्रवृतिहरू हुन् जसले सामान्यतया ब्रान्डमा सकारात्मक प्रकाश दिन्छ। तपाइँ तपाइँको व्यवसाय मा केहि सामाजिक सचेत अभ्यासहरु सम्मिलित संग गलत हुन सक्नुहुन्न।
थप रूपमा, भर्चुअल वास्तविकता र संवर्धित वास्तविकताको समावेशले तपाईंलाई उद्योगमा अन्य व्यवसायहरूसँग गतिमा रहन मद्दत गर्न सक्छ।
तपाइँले तपाइँको सम्पूर्ण मिशन परिवर्तन गर्नु पर्दैन वा तपाइँका अपरेसनहरू प्रचलनहरूसँग पूर्ण रूपमा पङ्क्तिबद्ध गर्नको लागि परिवर्तन गर्नु पर्दैन, तर उद्योगमा नयाँ के छ भनेर राख्दा तपाइँलाई तपाइँको प्रतिस्पर्धामा एक खुट्टा दिन सक्छ जुन त्यसो गर्न बेवास्ता गरिरहेको छ।
2. व्यावसायिक फोटोहरू प्रयोग गर्नुहोस्
तपाइँको कपडाको सूचीलाई बाँकी भन्दा फरक बनाउनको लागि उत्तम तरिकाहरू मध्ये एक पेशेवर फोटोहरू प्रयोग गर्नु हो। विभिन्न मोडेल र विभिन्न कोणहरूमा आफ्नो लुगा फोटो खिच्न समय लिनुहोस्।
यो लुगाहरू भन्दा धेरै आकर्षक देखिन्छ जुन पुतलामा स्टेज गरिएको छ वा मोडेलको फोटोमा फोटोसप गरिएको छ।
जब तपाइँ विभिन्न कोणहरूमा सिम र कपडाको क्लोज-अप तस्बिरहरू लिनुहुन्छ, यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई कपडाहरू वास्तविक जीवनमा कस्तो देखिन्छ भनेर राम्रो विचार दिन्छ।
3. उत्पादनहरू र विवरणहरू अनुकूलन गर्नुहोस्
Alibaba.com एउटा बजार हो जसले खरिदकर्ताहरूलाई उनीहरूले खोजिरहेका वस्तुहरू फेला पार्न मद्दत गर्न खोज इन्जिन प्रयोग गर्दछ। यसको मतलब यो हो कि तपाइँ तपाइँको लक्षित दर्शकहरु को लागी खोजी गर्दै किवर्डहरु संग तपाइँको उत्पादनहरु र विवरणहरु लाई अनुकूलित गर्न सक्नुहुन्छ।
४. अनुकूलन प्रस्ताव गर्नुहोस्
धेरै खरीददारहरूले अनुकूलित टुक्राहरू खोज्छन्, चाहे यो रंगहरू छनोट गर्न वा लोगोहरू थप्नको लागि आउँदछ। यदि तपाईंसँग त्यसो गर्न स्रोतहरू छन् भने समायोजन गर्न इच्छुक हुनुहोस्। तपाईको प्रोफाईल र तपाईले प्रस्ताव गर्नुभएको उत्पादन सूची पृष्ठहरूमा संकेत गर्नुहोस् OEM सेवाहरू वा ODM क्षमताहरू छन्.
5. नमूनाहरू पठाउनुहोस्
फेसन उद्योगमा उपलब्ध (र वांछित) कपडाका गुणहरूको यस्तो विस्तृत दायरा भएको हुनाले, तपाईंका ग्राहकहरूले नमूनाहरूको कदर गर्नेछन् ताकि उनीहरू आफूले खोजिरहेका कुराहरू किनिरहेका छन् भनी निश्चित हुन सक्छन्। यसरी उनीहरूले आफ्नो लागि कपडा महसुस गर्न सक्छन् र वास्तविक जीवनमा लेखहरू हेर्न सक्छन्।
धेरै बिक्रेताहरूले प्रयोग गर्छन् न्यूनतम आदेश मात्रा उपभोक्ताहरूलाई थोक दरमा कपडाको व्यक्तिगत वस्तुहरू किन्न प्रयास गर्नबाट रोक्न। तपाईं खुद्रा मूल्यमा नमूनाहरू पठाएर यसको वरिपरि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
6. अगाडि योजना गर्नुहोस्
समय अगाडी मौसमी कपडा बिक्री मा प्रवाह को लागी तयार गर्नुहोस्। यदि तपाईंले डिसेम्बरमा जाडो मौसम सुरु हुने ठाउँमा अवस्थित व्यवसायहरूलाई कोटहरू बेच्नुहुन्छ भने, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंका खरिदहरूसँग सेप्टेम्बर वा अक्टोबरमा स्टक छ।
यदि खरीददारहरू "मौसमविहीन" फेसन तिर झुकेका छन् भने, त्यहाँ अझै पनि वर्षभरि मौसम परिवर्तन हुँदा लुगाका यी वस्तुहरूको आवश्यकता छ।